Belarus: Rufu rwemiriri wechipiri, UN inorira alarm -
Belarus: Rufu rwemiriri wechipiri, UN inorira alarm
By bryamangwanabe On Nyamavhuvhu 13, 2020
Mumwe anoratidzira afira muBelarus muchitokisi, rufu rwechipiri kubva pakapesana nemapurisa nemusi weSvondo zvichitevera kukwikwidza kwakaitwa sarudzo dzemutungamiri wenyika.
Vakuru vanoti chakakonzeresa kufa kwemakore makumi maviri nemashanu kuGomel hazvina kujeka. Amai vake vanoti vaive nedambudziko remoyo uye vakachengetwa kwemaawa akawanda muveni yemapurisa.
MuBrest, mapurisa akataura kuti vanoshandisa mabara mupenyu pavanorwiswa.
UN yakashora kushandiswa kwechisimba nevatungamiriri, sekuratidzira kuri kuenderera kusvika husiku hwechina.
Gurukota rinowona nezvekuchengetedzeka kweUnited Nations, Michelle Bachelet, akati mapurisa anonzi akashandisa simba rakawandisa, kupfura mabara erangi nemakona emvura, pamwe nemabhiridha akaomarara.
"Mishumo inoratidza kuti vanhu vanopfuura mazana matanhatu ezviuru vakasungwa mazuva matatu apfuura, kusanganisira vakapfuura, pamwe nevadiki, vachiratidzira kusungwa kwevakawanda kutyora kuri pachena kodzero dzepasi rose." , at Mme Bachelet vakadaro vachitaura. .
"Mishumo yekubatwa zvisina kunaka panguva uye mushure mekuvharirwa iri kutonyanya kunetseka," akawedzera, achidaidzira kuti vaburitswe vese vakasungwa zvisiri pamutemo. Terevhizheni yenyika yakaratidza kushungurudzwa kwevasungwa vakasungwa uye vakabvunza kana ivo vari kuda kuramba "vachinja".
Nhoroondo yevhidhiyoVashandi veBBC muMinsk vakasangana nemhirizhonga Muvhuro manheru
Vanenge mazana maviri varatidziri vakakuvara, vamwe zvakakomba. Vashandi veBBC vakapwiswa nemapurisa neChipiri manheru.
Mumwe anoratidzira akafa Muvhuro panguva yekuratidzira kuMinsk, guta guru. Belarusian Interior Ministry yaipomera kuti chimwe chinhu chakaputika chakange chakavhomora muruoko rwake.
Dzimwezve mhirizhonga dzakataurwa neChitatu manheru apo varatidziri vakaungana zvakare kuMinsk nemamwe maguta eBelarusian. Nhamba mumigwagwa dzaiita sedzidiki pane nousiku hwapfuura.
Kuratidzira uku kwakatanga kwapera maawa mushure memutungamiri weBelarusian Alexander Lukashenko, musimba kubvira 1994, anonzi akakunda musarudzo yeSvondo, iyo yakapihwa mutongo neEU sekuti "hapana wakasununguka kana rusarura".
Mumiriri mukuru webato rinopikisa, Svetlana Tikhanovskaya, akabva asungwa kwenguva pfupi asati atizira kuLithuania yakavakidzana.
Chii chatinoziva nezverufu rwemuratidzi muGomeri?
Iye murume ane makore makumi maviri nemasere akafa mudhorobha rekumaodzanyemba neChitatu, komiti yekuongorora yeBelarusian sekutaurwa kwakaitwa neBelta nhau agency.
muzvinambiriMinsk vakadzi vakaungana neChitatu kuti vatsigire vasungwa vanoratidzira
Komiti iyi yakati murume uyu akasungwa nemusi weSvondo uye akazotongerwa mazuva gumi mutirongo achipinda mukuratidzira zvisiri pamutemo.
Akaendeswa kuchipatara paakatanga kunzwa kusanzwa - asi akazofa, komiti yakati. Chiitiko ichi chiri kuferefetwa.
Prince Andrew: haatore chikamu mumhemberero dzemakore zana ...
Tour de France: kupera kwekutonga kwaIneos naBernal!
Covid-19: kusungwa kwemavhiki matatu kwakaziviswa muIsrael!
Amai vemuratidziri vakaudza Radio Free Europe kuti mwanakomana wavo haana kuita chero kuratidzira uye akasungwa achienda kunoona musikana wake.
Nyika yakaita sei?
Lukashenko akakunda makumi masere muzana evhoti yeSvondo, sekureva kwemakurukota esarudzo, asi paine humbowo huzhinji hwekuvhota.
Mukuru wezvekunze weEU, Josep Borrell akati maBelarusians airatidza "chishuvo chekushandurwa kwema demokrasi" panguva yesarudzo.
Gurukota rezvekunze reSweden rinoti makurukota ekunze eEU achasangana neChishanu kuti vazeye mafambiro ezvirango paBelarus.
Lithuania, Poland neLatvia vakazivisa kugadzirira kwavo kuita basa rekureverera, chero zviremera zveBelarusian zvichimisa mhirizhonga kune vanopokana, kusunungura varatidziri voita kanzuru yenyika nenhengo dzenzanga. Vakayambira kuti imwe nzira yaive sanctions.
muzvinambiriAlexander Lukashenko ave pachigaro kubvira 1994
Munyori wezvekuUnited States, VaMike Pompeo, vakabvuma kuti vhoti "yakanga isiri yemahara uye yakasarudzika", achiwedzera kuti vanhu "vanofanirwa kuva nerusununguko rwavanoda".
Zvichakadaro, Mutungamiri weRussia Vladimir Putin akamborumbidza Lukashenko mukukunda kwake, kunyangwe achipomerana mhosva yekupomera Russia kuti Lukashenko aedza kubatanidza vanopikisa.
Vatungamiriri veChina, Kazakhstan, Uzbekistan, Moldova neAzerbaijan vakatumira mameseji ekutsigira.
Chii chakaitika kune vanopikisa?
Wakati Mai Tikhanovskaya, makumi matatu nematatu, vaenda kukomiti yesarudzo neMuvhuro manheru kunonyunyuta nezvezvabuda izvo zvakangomupa gumi muzana yezvevhoti, akasungwa kwemaawa manomwe. Chipiri mangwanani, akasvika kuLithuania.
Aive anogara-pamba-amai kusvika apinda mujaho mushure mekunge murume wake asungwa uye arambidzwa kunyoresa kuvhota.
Aive mumwe wevakadzi vatatu vakasunga zviwanikwa zvavo kuti vatungamire vanopikisa. Veronika Tsepkalo akatiza Belarus pazuva rekuvhota uye Maria Kolesnikova anosara kuBelarus.
Sekutaura kwemumwe shamwari, Muzvare Tikhanovskaya vakadzingwa munyika nevakuru sesungano yechibvumirano chekubvumidza kuburitswa kwemaneja wake wekuratidzira.
Nhoroondo yevhidhiyoSvetlana Tikhanovskaya: "Hapana imwechete hupenyu yakakosha zviri kuitika ikozvino"
Vhidhiyo yechipiri yakazoonekwa uye ikaita kunge yaigadzirwa panguva yekuvharirwa kwake. Iyo tsoka inomutaridza, anodzika pasi, achivhunduka achiverenga script sezvaanokurudzira vatevedzeri vake kuti "vateerere mutemo" uye vasiyane nekuratidzira mumigwagwa.
Pamberi pesarudzo yeSvondo, mapoka akaungana kumisangano inopikisa, pamwe nevaBelarusian muchikamu vakatsamwiswa nemhinduro yehurumende yaLukashenko kuungano.
Mutungamiriri akaramba achidzvinyirira kubuda, achiyambira vagari kuti vanwe vodka uye vashandise saunas kurwisa chirwere ichi.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://www.bbc.com/news/world-europe-53760453?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world&link_location=live-reporting-story
Belarus: Rufu rwechipiri protenderiyo UN inorira alarm
🛑Eudoxie Yao pakupedzisira anosarudza pahukama pakati paCarmen Sama naEmma lohoues - Vhidhiyo
🐀MARÍA PAULA ROMO se le está durmiendo el diablo en Medio de Nagradas, POLÉMICAS y denuncias😮 - Vhidhiyo
Prince Andrew: haatore chikamu mumhemberero dzemakore zana ababa vake Firipi ...
Nyanzvi yezvematongerwo enyika Bernard Debré afa!